Galmudug oo ka cabaneysa ciidamada Puntland iyo kuwo Mareykan ah – Balcad.com Teyteyleey
Galmudug oo ka cabaneysa ciidamada Puntland iyo kuwo Mareykan ah
By Abdi Malik	 On Jul 24, 2017
Maamulka Galmudug ayaa sheegay in Ciidamo ka tirsan kuwa Puntland oo garab ka helaya kuwo Cadaan ah ay siqaldan dad uga kaxeestaan dad rayid ah oo ay ka mid yihiin dad Ganacsato ah balse aysan aheyn Shabaab.
Gudoomiyaha Amniga iyo Siyaasada Gobolka Mudug ee Maamulka Galmudug Cabdi Xuseen Maxamed oo la hadlay Dalsan ayaa sheegay in howlgalkaas ay masuuliyadeeda leedahay puntland islamarkaana hada kahorna ay sidaan oo kale siqaldan waxyeelo ugu geesteen Shacab reer Galmudug ah.
Waxa uu ugu baaqay Puntland in arimahan oo kale ay ka digtoonaadaan islamarkaana iyagu aysan waxba ka ogeyn falkaasi dhacay Galmudugna aysan u dulqaadan karin dhibaatoyinka soo laab laabana ee laga Geysanayo Galmudug.
The post Galmudug oo ka cabaneysa ciidamada Puntland iyo kuwo Mareykan ah appeared first on Ilwareed Online.
Dowladda Soomaaliya oo beenisey eedeymo uu jaraa’idka Indian Ocean Newsletter Uu qoray
Ciraaq oo Soomaaliya kala talinaysa dagaalka Shabaab